Posted On Diaben'ny 21, 2019 Diaben'ny 21, 2019 By HBfanehoan-kevitra
Fotoana tsara foana ho an'ny divay fotsy na rosé, fa ny masoandro sy ny hafanana lohataona izay nanomboka androany dia mahatonga ny divay mafana amin'ny tsara indrindra. Ary moa ve izany sakafo izany eo amin'ny masoandro miaraka amin'ny namana, mpanan-karena 22 - 24 ary miaraka amin'i Glass Albariño Tohizo ny famakiana
Sokajy: trano fanatobiana entana/Uncategorized/Divay avy any Espaina
Posted On Diaben'ny 12, 2019 Diaben'ny 12, 2019 By HBfanehoan-kevitra
Manakaiky ny andro ny Andron'ny Ray ary koa ny fahafahantsika manome famantarana kely ho an'ny lehilahy manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika. Ilay olona izay niaraka tamintsika foana ary iza no tadiavintsika na amin'ny endriny samirery. Mpanafika iray, na aiza na aiza hitanao. Tohizo ny famakiana
Sokajy: Divay avy any Espaina/Fitsidihana tsy maintsy arahina any Espaina
Posted On 16 Febroary, 2019 16 Febroary, 2019 By HBfanehoan-kevitra
Ireo Espaniola Bierzo Espaniola dia miha-mitombo hatrany hatrany erak'izao tontolo izao, ary tsy vitan'ny hoe lazain'ny lohateny. Ny tsiranoka voalohan'ny Mencía dia nahazo izany noho ny fahalalana izay nozakainy ho an'ny taranaka maro. Ny Vinos del Bierzo dia miavaka amin'ny lanjany lehibe, mahatalanjona Tohizo ny famakiana
Posted On 30 Novambra, 2018 By HB1 Comment
Tonga soa eto amin'ny isika Magazine natao tany Espaina, ny toerana dia hahita fanazavana momba ny tsara indrindra avy any Espaina Gourmet vokatra toy ny divay, fromazy, Iberika, menaka oliva, sns mahagaga mba hitsidika toerana, ny tompony, ny tsara indrindra fisondrotana, mahay mitendry ny Gran Via sy ny maro hafa. Natao tany Espaina izahay Tohizo ny famakiana